Miady Ny Mba Hikarakarana Ireo Teratany Kumamoto Miisa 100.000 Nafindra Vokatry Ny Horohorontany i Japana · Global Voices teny Malagasy
Miady Ny Mba Hikarakarana Ireo Teratany Kumamoto Miisa 100.000 Nafindra Vokatry Ny Horohorontany i Japana
Voadika ny 30 Avrily 2016 9:05 GMT
Fijery avy eny an'habakabaka ny horohorontany nanerana ny Prefektioran'i Kumamoto, Japana. Tao anatin'io sary tamin'ny 17 Aprily io, lamba tsy lena mangamanga no nampiasaina hanaronana ireo tafo ravan'ny horohorontany tamin'ny 14, 15 ary 16 Aprily. Orambe nivatravatra no nanaraka ny horohorontany. Pikantsary avy amin'ny vaovao ofisialin'ny fantsona YouTube Sankei.
Namela olona maty 46 sy naratra 1.100 ny horohorontany hatreto.
Taorian'ireo andro nanaraka avy hatrany ny fotoana nitrangan'ireo horohorontany ny 15 sy 16 Aprily, farafahakeliny mponina 117.000 tao amin'ny prefektoran'i Kumamoto no nalàna tamin'ireo tranony potiky ny hovitrovitra in-600 raha kely indrindra.
Taty aoriana tao anatin'ny herinandro, nanery ny fampitsaharana ny asa fikarohana izay mety mbola ho velona ireo oram-be sy ny tahotra ny ho fikorisan'ny tany. Notaterin'ny mpilaza vaovao teo an-toerana Kumomoto Nichinich Shimbun, tamin'ny 22 Aprily, fa maherin'ny 290.000 ireo mponina tao amin'ny faritr'i Mashiki sy Minami Aso no tsy maintsy nafindra ho any atsinanan'ny tanànan'i Kumomoto.
Vaky avokoa ireo fantson-drano manerana ny prefektoran'i Kumomoto, trano maro no nirodana ary tapaka ireo lalana ka antony voalohany tsy hahafahana mamatsy ireo entana ho famonjena izany.
Tamin'ireo andro manaraka ny horohorontany, maro ny tatitra nataon'ireo mponina amin'ireo faritra samihafa tao amin'ny prefektoran'i Kumamoto nitalaho momba ny rano.
Sary iray nahitàna ny nanjo ireo mponina tao Kumamoto nandritra ireo horohorontany goavana.
— トマト大好き (@tmato30kcal) April 16, 2016
Hafatra iray nosoratana teo an-kianja filalaovan'ny sekoly ambaratonga voalohany Konan tao an-tanànan'i Kumamoto no mivaky hoe “Azafady andefaso rano fisotro” (sary nalaina tamin'ny 1:56PM, 16 Septambra, tao an-tanànan'i Kumamoto Chuo Ward).
Na izany aza, arakaraky ny nandehanan'ny fotoana, nanomboka tonga ireo entana famatsiana ireo faritra traboina nahafahana nanome fanaraham”-baovao tsara”:
https://t.co/psWNKtaaz5 【熊本地震】水を求めるメッセージが描かれていた江南中学校。お礼のメッセージが今日描かれていました。今日の午後の写真特集でhttps://t.co/2KEAKLNB07 pic.twitter.com/yEYXnKmxE3
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) April 20, 2016
Teny nosoratana teo an-kianja filalaovana] Misaotra tamin'ny rano! Hanomboka hitatitra amin'ny kamiao izahay!
.[Horohorontany tao Kumamoto; Sary: Sugakawa Kotowari] kianja filalaovana an'ny sekoly ambaratonga voalohany Konan, izay teo no nangatahan'ireo mponina rano fisotro herinandro vitsivitsy lasa izay. Amin'izao fotoana izao, nanoratra hafatra fisaorana izy ireo. Jereo eto ireo sary farany taorian'ny horohorontany :
Ny Ivontoeran'ny Mpilatsaka An-tsitrapo Mpanavotra An-tsambokely (PBV), ny Fikambanana iray ao Japana izay misahana manokana ny fandrindrana ny ezak'ireo mpilatsaka an-tsitrapo aorian'ny loza, no nitatitra tao anaty Facebook tamin'ny 22 Aprily teo:
Tamin'ny alalan'ny fifanakalozam-baovao tamin'ireo governemanta eny an-toerana, ireo fikambanana miasa an-tsitrapo, sy ireo mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena, hitan'ny tarika fa tena henjana ny toedraharaha, noho ireo ezaka famonjena voasakantsakana noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana mavesatra, ireo lalana tsy azo ampiasaina, ary ny fitohizana horohorontany […]
[…] Tonga avokoa ireo entana vonjy voina avy amin'ireo firenena maro, saingy mbola somary ela ny fitsinjarana azy ireo ho an'ireo olona tràboina miandry any amin'ireo faritra maro samihafa. Be ny fanamby amin'ny fanasokajiana sy fizaràna ireo fitaovana noho ny fahatotorana manjo ny mpiasa ary ireo fotodrafitrasa simba. Nilaza ny tompon'andraikitra iray tao amin'ny governemanta fa voatery hanary ireo sakafo sasany (ohatra mofo / boletim-bary) izay efa lany andro ry zareo.
[…] Mitombo ny ahiahy mafy momba ny fiantraikany tsy mahomby loatra eo amin'ny fahasalamana sy ny trangan'aretina any anatin'ireo fialofana vonjimaika, anisany manokana amin'izany ireo beantitra sy ireo hafa marefo ara-pahasalamana. Mitatitra ireo vaovaon'ny Yahoo fa ho fanampin'ireo fahafatesana 48 vokatr'ireo horohorontany ireo, nisy koa 11 nifandraika tamin'ny dingana natao taty aorian'ilay loza.
Ny herinandro voalohany nisian'ny loza taorian'ny horohorontany tsy mbola nisy ny fialofana ampy ho an'ireo olona nafindra toerana. Nandritra ireo alina vitsivitsy voalohany, maro ireo natory teny ankalamanjana, teo ivelan'ny varavaran'ny kianja fanaovana basketball sy teny amin'ireo kianja filalaovana.
Nefa, satria nanomboka nijohy ny orana taty aoriana kely tamin'iny herinandro iny, maro ireo olona no nanapaka hevitra ny hatory tao anatin'ny fiarakodiany, nitarika ilay lazaina hoe “soritr'aretin'ny kilasy ara-toekarena“, na ireo tsy fikorianan'ny rà sy ireo aretin'ny lalàn-drà vokatry ny fiforetana mandritra ny fotoana maro izany.
Exercises help prevent embolism – The Japan News https://t.co/Pk6TBRoluD #熊本地震 #熊本大地震 #KumamotoEarthquake pic.twitter.com/L24Nr3h8VB
— The Japan News (@The_Japan_News) April 20, 2016
Manampy hisorohana ny fahatsentsehan'ny lalandrà ny fanetsehana vatana – The Japan News
Taorian'ireo orambe sy fahasimban'ireo fotodrafitrasa nanakana ireo ezaka fanampiana tany aloha, nanao antso avo hanaovana fanampiana faobe iarahan'ireo masoivohom-panjakana isankarazany ny governemanta Japoney, mba hitondra rano, fialofana, sakafo mafana ary ranomafana fandroana.
Nanao hetsika fanampiana ireo Japoney Mpiandry Morontsiraka tao amin'ireo seranantsambo manerana ny prefektoran'i :
— 海上保安庁 (@JCG_koho) April 22, 2016
Ny 23 Aprily, hanao asa vonjy rano vaky mba hanomezana rano, ny Mpiambina ny Morontsiraka ao Japana, angovo sy rano mafana fandroana ho an'ireo olona izay tratran'ny horohorontany. Tahaka izao manaraka izao ny fandaharam-potoana:
Misumi: 8 Maraina hatramin'ny 7 Hariva
Kumamoto: 12:30Antoandro hatramin'ny 4:30Hariva
Yashiro: 10Maraina hatramin'nyo 7Hariva
Azafady aoka isika hahatsapa fa maro ireo fangatahana misavovona ka tsy ny olona rehetra akory dia mety ho afaka handro amin'ireo faritra ireo avokoa.
Nampiasa ireo ‘drone’ fakantsary ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitaterana (MLIT) ao Japana mba hakana ampahana lahatsary mikasika ny haben'ny fahasimbana.
Ity ampahan-tsary tao anatiny sy ivelan'ny tanànan'i Kumamoto ity, ary ny tanàna kelin'i Mashiki tao atsinanana dia mampiseho hoe toa inona ny loza nisy tao, ary ny antony nanery ny famindràna toerana ireo mponina tao:
Mampiseho ireo fahavoazana goavana ihany koa ireo sary azo tamin'ny alalan'ny Drone, tao amin'ny monisipalin'i Minami Aso, faritra iray somary ambanivohitra ao atsinanan'ny tanànan'i Kumamoto, izay tapaka ny fanampiana noho ireo fikorisan'ny tany.
Mampiseho ireo trano nirodana sy ireo tariby mifandisondiso izay mbola niasa nandritra ilay andiana horohorontany tamin'ny herinandro lasa, ireo sary azo tamin'ny drone:
Raha toa nibahan-toerana tamin'ireo vaovao ny fandrakofana mikasika ny faharavàna tao amin'ny prefektora misy ireo vondrom-piarahamonina tao Kumamoto, ny sasany nanindry mafy fa tratran'ny horohorontany goavana ihany koa ny faritra manakaiky ny Prefektoran'i Oita.
Manoratra eo amin'ny bilaogin'ny tambajotra Spotlight ny mpampiasa iray Ichigo Ichie (苺いちえ), nanambatra tatitra iray avy amin'ny satan'ireo ezaka fanavotana ao Oita izay ahitàna ireto bitsika manaraka ireto:
— いけまい (@Nononbiri) April 17, 2016
Aza adino izahay azafady. tsy mahazo fanampiana ihany koa i Yufuin [ao amin'ireo fariba be tendrombohitra andrefan'ny prefektoran'i Oita]. Rava ny antsa-manilan'ny tranon'ny renibeko ao Yufuin ary tsy afa-monina ao intsony izy.
Tadidio ihany fa tsy Kumamoto fotsiny [no niharan'io horohorontany io].
Iray hafa mpampiasa Twitter i Oita manamarika hoe :
— とにぃ氏✩熊本♡⃛大分 (@102_12so) April 21, 2016
[Nalaiko tamin'ny gazetin'i Asahi nivoaka ny 21 Aprily ity]
Efa mazava tsara ny sata misy ireo kaominina rehetra [izay nitrangan'ny fahasimbana] tao amin'ny prefektoran'i Kumamoto. Antsoina fotsiny hoe “Prefektora Oita” ny Prefektoran'i Oita. Tsy kely loatra ve io fomba filaza io? Tokony saininareo fa tsy Kumamoto irery ihany akory no tràdoza. Ampy hahatezitra anareo izany.
An'hetsiny ireo olona nafindra toerana hiala ny tranony noho ny tanjaky ny tohin'ireo horohorontany, ary mitohy tsy maintsy iainana anaty fisalasalàna ireo loza mitatao nateraky ny tondradrano sy ireo fikorisan'ny tany.
Misy ireo ezaka sasany hitondrana fanampiana ara-tsaina:
— なるみ (@__tkk763) April 19, 2016
Hitako tao amin'ny fahitalavitra ity, saingy zavatra iray tena nahafinaritra no nanaovan'ny Departemanta Anglisy azy, tpt.
3 andro izayMalezia